ဆလိုင်းမြတ်နိုးသူ | MoeMaKa Burmese News & Media
>My academy Sein - Joke on you Academy ...
>Cartoon Maung Yit - Coffins for Generals or Burmese cyclone victims ?
>student movement 18
Posts Tagged ‘ ဆလိုင်းမြတ်နိုးသူ ’
ဆလိုင်းမြတ်နိုးသူ ● ပျားရည်ဆမ်းခရီးထွက်ခြင်း (မိုးမခ) ဧပြီ ၇၊ ၂၀၁၈ သာယာမှုအတွက် နာကျင်မှုရင်းရတယ် ပြောတော့ ငါ နိုးလာ ဘာလို့ကိုယ်တို့ တယောက်နဲ့တယောက် လိမ်ညာနေကြတာလဲ ငါက သကြားသီးဆို မှည့်ပေးဖို့အဆင်သင့်ပဲ ၁၉၉၅...
ဆလိုင်းမြတ်နိုးသူ ● အားလပ်ရက် (မိုးမခ) မတ်လ ၃၀၊ ၂၀၁၈ ဒီနေ့ဆိုင်မှာ မျက်ခုံးညှပ်ဖို့တွေးထားတယ် ပါးပါးကလေးနဲ့ တဂျီဂျီအော်နေမယ် အရိုးကလေးတွေ ကော်ပတ်တိုက်ရမယ် ပြီးတော့ မျက်လုံးကိုလည်း ထုတ်ဆေးရမယ် ပြီးတော့ ရေကူးကန်လည်း နေလှမ်းရမယ်...
ဆလိုင်းမြတ်နိုးသူ ● အားလပ်ရက် ကဗျာရေးခြင်း (မိုးမခ) အောက်တိုဘာ ၂၅၊ ၂၀၁၇ ပုရွတ်ဆိတ်တွေ သေကြောင်းကြံသွားကြရတာက ချိုစရာမရှိတော့လို့အဲဒီနေ့ဟာ ကမ္ဘာကြီးပျက်တဲ့နေ့ဖြစ်မယ်တဲ့ မဟုတ်ဘူး ကျွန်တော် ကဗျာဘယ်လိုမှ ရေးမထွက်လို့ပါဆိုတော့ ပရောဖက်ကြီးက...
ဆလိုင်းမြတ်နိုးသူ ● ခူးဆွတ်ပြီးသား သစ်သီးများဟာ ရေငွေ့ ပျံနေကြဆဲ (မိုးမခ) စက်တင်ဘာ ၁၊ ၂၀၁၇ ၁။ အိမ်ရှင်မတစ်ယောက်ရဲ့ဆံပင်တွေ ပြတ်ကျသွားကြတယ် တစ်နေရာမှာ နတ်သမီးတွေ ကခုန်နေကြရဲ့ စိတ်ကူးထဲက နတ်ဘုံ နတ်နန်းတစ်ခု...
ဆလိုင်းမြတ်နိုးသူ ● လာလီပေါပ့်များနှင့် နေထိုင်ခြင်း (မိုးမခ) သြဂတ်စ် ၁၄၊ ၂၀၁၇ ငါဟာ ငါမှဟုတ်ရဲ့လားလို့ တွေးချိန်မရဘူး လာလီပေါပ့်တွေ အထပ်လိုက် ဒါ အပျင်းဖြေစရာကစားနည်းတခုဖြစ်မယ်ဆိုတာ ရိပ်မိတယ် သေချာအောင် အတည်ပြုလို့မရ မြက်ခင်းစိမ်းစိမ်းပေါ်က...
ဆလိုင်းမြတ်နိုးသူ ● ကွတ်ခိုင်
ဆလိုင်းမြတ်နိုးသူ ● ကွတ်ခိုင် (မိုးမခ) ဇူလိုင် ၁၁၊ ၂၀၁၇ ကွတ်ခိုင် (၁) ……. တကိုယ်တည်းနေပြီး လူတွေကြား ခဏခဏ ပျောက်ကွယ် သစ်သီးပုပ်ကလေးတွေ ရေထဲ ကိုယ်မြင်ရ မွကြေနေတဲ့ ဦးခေါင်းပိုင်ရှင်...
ဆလိုင်းမြတ်နိုးသူ ● ၂၀၁၇ (မိုးမခ) မေ ၂၄၊ ၂၀၁၇ ပြတိုက်ထဲကနေ ငါ ပြန်လာခဲ့တယ် ကျောက်ဖြစ်ရုပ်ကြွင်းတွေဟာ ငါ့ကိုသယ်ဆောင်ကြလို့အရသာရှိတယ်လို့ အမြဲတမ်းကြိုးစားတွေးခေါ်ရှင်သန်တဲ့ မြက်ပင်တွေဟာ အရသာမဲ့နေကြမှန်း သိခဲ့ရ အချိန်မရွေး...
ဆလိုင်းမြတ်နိုးသူ ● အိပ်ရေးမဝသူရဲ့ မမြင်ရ သစ်သီး (မိုးမခ) ဇန်နဝါရီ ၁၃၊ ၂၀၁၇ ဆင်တွေဟာ ဓာတ်ဗူးထဲမှာ နွေးနွေးနဲ့ အကြီးကြီး အိအိထိုင်နေကြ ပြီးတာနဲ့ သူတို့ဟာ ထွက်လာကြပြီးတော့ ငါတို့ ကို...
ဆလိုင်းမြတ်နိုးသူ ● အန်ဒါဂရောင်းတယောက်၏ ဆဲလ်များ ခွဲစိတ်ကြည့်ခြင်း (မိုးမခ) ဒီဇင်ဘာ ၂၄၊ ၂၀၁၆ တက်တူးတွေနဲ့ မြေပုံကို ခြေဖနောင့်မှာ ဒါဟာ အလေးပြုခြင်း ဒါဟာ စစ်မှန်တယ်ထင်ရတဲ့ အတုအယောင်တွေထဲက တခု အဝတ်စလေးပဲ...
ဆလိုင်းမြတ်နိုးသူ ● ရောဂါသည် ခရီးသွားနေသည် (မိုးမခ) နိုဝင်ဘာ ၇၊ ၂၀၁၆ လက်ထဲငွေတပြားမှရှိမနေဘဲ ဘတ်စ်ကားမှတ်တိုင်တွေဆီအငမ်းမရသွားခဲ့ ဆီဆိုင်နားအရောက် ကောင်မလေးဟာ သူ့လင်ငယ်ပေးဖို့ ကောင်တာထဲက ကင်းမြီးကောက်ပုံတွေနှိုက်ယူ အေးဆေးငြိမ်သက်ပြီး သူခိုးသူခိုးလို့ ထအော်တာကို သူတွေ့ရ...